inona no HDMI 2.1 Famaritana; | Huachuang Electronic
Famaritana HDMI 2.1
HDMI® Specification 2.1 no famaritana farany ny famaritana HDMI ary manohana andrana haingam-peo avo lenta kokoa sy haingam-panavaozana ao anatin'izany ny 8K60 sy 4K120, ary ny famaha hatramin'ny 10K. Formula HDR dinamika dia tohizana ihany koa ary ny fahafaha-m bande bandy dia mitombo hatramin'ny 48Gbps.
Ny fanohanan'ny bandeita 48Gbps dia ny tariby vaovao HD High Speed ​​HDMI. Ny tariby dia miantoka ny endri-javatra ultra-bandwidth tena avoaka dia natolotra ao anatin'izany ny horonantsary 8K tsy voatafika amin'ny HDR. Izy io dia mampiseho EMI ambany kely (fidirana electro-magnetic) izay mampihena ny fitsabahana miaraka amin'ireo fitaovana an-tariby tsy lavitra. Mivadika indray ny tariby ary azo ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana misy HDMI efa misy.
HDMI Specification 2.1 endri-javatra manasongadina dia misy:
Ny fanapahan-kevitra an-tsarimihetsika avo lenta dia manohana vahaolana marobe avo lenta ary famerenam-bidy haingana kokoa ao anatin'izany ny 8K60Hz sy 4K120Hz ho an'ny fijerena an-tsarimihetsika sy ny antsipirihany amin'ny antsipirihany haingana. Ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 10K dia tohanana koa amin'ny AV ara-barotra, ary ny fampiasana indostrialy sy manokana.
Ny fanohanan'ny HDR dinika dia manome antoka ny fotoana rehetra ananan'ny horonan-tsarimihetsika amin'ny lanjany tsara indrindra ho an'ny halaliny, ny antsipirihany, ny hazavana, ny tsy fitoviana ary ny maimaim-bolo miloko maro kokoa — eo amin'ny sehatra na seho-eny, na ny fisian'ny rindran-tsary.
Ny tariby Ultra High Speed ​​HDMI dia manohana ny haben'ny 48G ho an'ny HDMI 2.1 tsy misy fanamafisana. Ny tariby ihany koa dia ahitana ny famoahana EMI tena ambany ary miverina amin'ny alàlan'ny dikan-takarina momba ny HDMI Specification ary azo ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana HDMI efa misy.
Tariby HD High Speed ​​Speed ​​with Label